May Nyane: ခရီးသွားဝတ္ထု
ကျမဖတ်ဖူးတဲ့ ဆရာမောင်ထွန်းသူရဲ့ ဘာသာပြန်.... Alexandra Dumas Junior ရဲ့ Camille (ကင်မီလီ) ဆိုတဲ့ ၀တ္ထု ။ အဲဒီဝတ္ထုကို ဖတ်အပြီးမှာ ကျမ မြန်မာပြည်က sex worker တွေ ဘ၀ကို တွေးရင်း ရေးခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုပါ။ (အသစ်မရေးနိုင်ခင်စပ်ကြား အဟောင်းလေးတွေ တင်ပါလို့ တိုက်တွန်းသူတွေ အတွက်.. (ဂျစ်တူးလေးပြောနေကျလို).. ဆားချက်တာ ဆိုပါစို့။)
တွယ်ရာမဲ့လွင့်မျောသူလို ခံစားရသည်။ အစက်အပေါက်များစွာ စွန်းထင်းပေကျံနေသော ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ နေခြည်အလင်းတန်းပါးပါးလေးများ ဖြာကျနေသည်။ မှောင်အုံ့အုံ့ရှိနေသော အခန်းကျယ်ကြီးအတွင်းမှာတော့ ထိုနေခြည်တန်းကလေးများက စူးရဲစွာ တောက်ပ လင်းလက်နေကြသည်။ တင်းကျပ်စွာ (ကြာမြင့်စွာ) ပိတ်ထား ခဲ့သော တံခါးချပ်များ၏အကြားမှ လာရသည့် အလင်းရောင်ပင်။ သူမ၏ဘ၀သည်လည်း မှောင်အုံ့ပျပျ ရှိလှသော သူမ၏အခန်းကျယ်ကဲ့သို့ပင် ညစ်ထေးစွာ၊ သာယာမှုကင်းမဲ့စွာ၊ မှောင်မိုက် လှောင်ပိတ်စွာ ရှိနေ သည်ကို သတိရသည်။ သို့သော်... သူမ၏ဘ၀ အခန်းကျယ်ကြီးအတွင်းတွင်မူ နေခြည်တချို့ ဖြာကျမနေပေ။
အခန်းကျယ်ကြီးတွင် ခန်းနားထည်ဝါမှုတို့ မှိန်ဖျော့သည်နှင့်အတူ လျပ်စစ်မီးပွင့်တို့လည်း ပါးလျစ ပြုလာသည်။ ဝေစည်ခဲ့သော အသံဗလံတို့ တိုးသက်ကာ တံခါးခေါက်သံဖွဖွတို့ ကျဲပါးလာသည်။ အခန်းတွင်းမှ ပရိဘောဂတို့နှင့်အတူ သူမ၏ပျော်ပါးဖေါ်တို့ တစတစ ပျောက်ကွယ်သွားကြသည်။ အဖေါ်ဟူ၍ သူမ၏ အလုပ်သမားတစ်ယောက်ပင် မရှိတော့သော အချိန်တွင်မူ သူမသည် ဆေးလုံးများစွာနှင့် အပ်ချွန်ဒဏ်ချက် တို့ကို လုံးဝ ကျောခိုင်းလိုက်တော့သည်။ သက်ဆိုင်လိုသူ မဲ့သွားသော အိမ်ကြီးနှင့် ငွေကြေးအနည်းငယ်ကို အဖေါ်ပြုကာ သူမ၏နေ၀င်ချိန်ကို စောင့်ရတော့သည်။ နောင်တ ဟူသည်ကို သူမ စတင် တွေ့ဖူးလာခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်ပင်၊ သူမသည် ရောက်လာမည်ဟု မရေရာသော အနာဂတ်ခရီးကိုလည်း စိတ်ကူးယဉ် ဖြတ်သန်း ကြည့် တတ်ပါသည်။ အနာဂတ်အိပ်မက်တွင် ရောဂါတို့ကင်းပ၍ ပြန်လည် လှပစိုပြေလာသော ဘ၀ရှိပါသည်။ ထိုဘ၀တွင် သူမသည် အခန်းကျယ်ကြီးကို စွန့်ကာ (သူမ၏ပြီးဆုံးခဲ့သော ဘ၀ညစ်ကို ဖျောက်နိုင်သည် ဟုလည်း မှတ်ယူကာ) ဘ၀သစ်တစ်ခုဆီသို့ သွားမည်။ ထိုဘ၀တွင် ငြိမ်းချမ်းသာယာမှုရှိမည်။ ခင်ပွန်းသည် ကောင်းတစ်ဦး မရှိလျှင်သော်မှ နှစ်လိုဖွယ်မိတ်ဆွေ တစ်ဦးနှစ်ဦးရှိလျှင် ပြည့်စုံနိုင်ပါသည်။ ထိုကာလတွင် သူမဘ၀၌ နေခြည်သာတို့ လင်းလက်ဖိတ်ပြက်သော ဧည့်ခန်းကျဉ်းကလေးပါရှိသည့် အိမ်ကလေးတစ်လုံး ရှိပါမည်။ ထိုအခန်းကျဉ်းထဲတွင် တရားဓမ္မသံတို့ကို ဝေစည်စေမည်။ ယ္ခင်က အပူပြုံးများ၊ အပူနံ့များ၊ အပူသံ များသာ လွှမ်းခဲ့ရသောသူမ၏ ညများတွင် အမွှေးတိုင်ရနံ့များ ဆီမီးရောင်နှင့် ဘုရားရှင်ကို ကပ်လှူပူဇော်သည့် ပန်းရနံ့သာ ဖုံးလွှမ်းစေမည်။ “ပူပြင်းသော အလှရှင်သွယ်” ဘ၀ကို မှောင်မိုက်ပျောက်ကွယ်စေကာ “အေးချမ်းသော တရားရှင်သွယ်” ဘ၀ကို ပြုစုမည်။ သို့နှင့်ပင် သွက်လက်ရှင်သန်မည့် ဘ၀တစ်ခုကို အိပ်မက် မက်မိပြန်လေသည်။
မေငြိမ်း (ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၇-အောက်တိုဘာ)
Thanks u these days for posting novels. I love all :) . BTY, ကင်မီလီ က မောင်ထွန်းသူ ဘာသာပြန်တာပါ။
ကိုအောင်ဖြိုးလေးရေ.. ပြင်လိုက်ပြီနော်။ ကျေးဇူး
ဒီဇတ်လမ်းလေးကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ် ဆရာမ ။ လမ်းမှားကိုမရောက်မိစေဖို့အတွက် နမူနာပြလိုက်တဲ့ ဇတ်လမ်းလေးတစ်ခုပါပဲ :)